Ngaphezulu kwamatyala angama-40,000 amatsha e-COVID kwiintsuku ezi-2 i-India ibuza amazwe amabini ukuba amisele ixesha lokubuyela ekhaya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » Ngaphezulu kwamatyala angama-40,000 amatsha e-COVID kwiintsuku ezi-2 i-India ibuza amazwe amabini ukuba amisele ixesha lokubuyela ekhaya
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Urhulumente wase-India ucele amazwe aseKerala naseMaharashtra ukuba aqwalasele ixesha lokufika ebusuku njengeziganeko ezintsha ze-COVID.
I-India ibike ngaphezulu kwe-40,000 yosulelo olutsha lwe-COVID-19 kwiintsuku ezimbini zilandelelana ngolwe-Sihlanu.
Usulelo olutsha lwe-coronavirus lukhuphuke kakhulu e-India kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo.
I-Kerala inike ingxelo malunga ne-60% yamatyala amatsha kwiveki ephelileyo, ilandelwa yi-16% eMaharashtra.
Urhulumente ophakathi waseIndiya ubongoze amazwe aseKerala naseMaharashtra ukuba abeke ixesha lokufika ebusuku kwiindawo ezinamanani osulelo lwe-coronavirus njengoko i-India ibhale ngaphezulu kwe-40,000 yamatyala amatsha e-COVID-19 kwiintsuku ezimbini zilandelelana namhlanje.
Iimeko zeCoronavirus ziye zancipha zaya kwiinyanga ezi-5 eziphantsi ezingama-25,166 phakathi ku-Agasti kodwa zonyuke kakhulu kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo, ikakhulu eKerala ebisandula ukubamba umnyhadala omkhulu apho iintsapho zihlala zihlangana.
I-India ibike i-44,658 entsha ye-COVID-19 yosulelo ngolwe-Sihlanu, ithathe inani elipheleleyo laya kwizigidi ezingama-32.6, eyona ininzi emhlabeni emva kwe-United States. Ukufa kwenyuka ngama-496 ukuya kuma-436,861.
KeralaKwincam esemazantsi e-India, kuye kwakho malunga neepesenti ezingama-60 zamatyala amatsha kwiveki ephelileyo kwaye ngaphezulu kwesiqingatha samatyala asebenzayo, elandelwa li-16 leepesenti kwintshona ye-Maharashtra.
“Imizamo engakumbi iya kufuneka ukubamba ukwanda kosulelo,” i ubulungiseleli basekhaya esitatimendeni ngoLwesine ngokuhlwa emva kokuba unobhala wakhe ebambe intlanganiso nala mazwe mabini, apho iKerala neMaharashtra bacelwa ukuba "baphonononge ithuba lokubeka ixesha lokufika ebusuku kwiindawo ezinethemba eliphezulu".
Umphathiswa uqinisekisile ukubonelelwa ngezixhobo zokugonya ze-COVID-19 ziya kuthunyelwa kula mazwe mabini.
I-India ukuza kuthi ga ngoku ilawule ngaphezulu kwe-611 yezigidi zeedosi zokugonya, inika ubuncinci idosi enye ngaphezulu kwesiqingatha sabantu abadala abangama-944 kunye needosi ezimbini ezifunekayo malunga neepesenti ezili-15.
IHawaii 6.1 Inyikima ivakele kuzo zonke iziQithi
IiNkokheli zoHambo lweHlabathi ziZithembile kuHambo olupheleleyo...
IRotterdam yaseHolland yaseMelika yi-$4.1 yezigidi...
Imiceli mngeni ephambili yezokhenketho yaseYurophu icaciswe ...
Ihotele yaseBlossom iHouston Yandisa iSibonelelo esitsha sokuVulelwa...
I-Indiya yenza iimvavanyo ze-COVID-19, inyanzelisa umntu ukuba avalelwe yedwa ...
UKhetho olutsha lwe-Visa ye-Expat inokonyusa uKhenketho lwe-GCC
Xa usiya kulala kubaluleke ngakumbi kunexesha elingakanani...
Umsi onetyhefu ugquma iDelhi emva komnyhadala wamaHindu
Oonozakuzaku baseMadrid bamenywe kwi-UNWTO Bribery...
Ukuxinana kweBone: Isixhobo esitsha soMlinganiso wokuQhawuka komhlaba
Ubunewunewu obutsha: I-Tasman Yazisa i-Australia Debut
I-Australia iphinda ivula indawo ekugonywe kuyo ngokupheleleyo eMzantsi...
Ityala elitsha lokuqala le-COVID-19 yeOmicron eqinisekisiweyo ...
UHilton Uvula eyona hotele inkulu eAsia Pacific
Iinqwelomoya zaseRhawutini eziya eLagos kwiSouth African Airways...
Ihotele evalelwe yedwa ye-COVID-19 yatshiswa eOstreliya
Uluntu lwaseMpuma Afrika lusungula ingingqi entsha yangaphakathi...